November 9, 2010 12:37 AM
ကိုမိုးယံရေ........... ကူညီပေးပါဦးဗျာ...... သတင်းလေးဖြန့်ပေးစေချင်ပါတယ်...
November 9, 2010 12:38 AM
ကိုအလင်းစက် ဟု ကျွန်တော်ခေါ်သော အစ်ကို၏ စေတနာကို သည်နေရာလေးမှာ ကြည့်ရှု စေချင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့သော ညီအစ်ကိုလို မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းသဖြင့် ၊ ကိုယ်တိုင် လည်း အလှူဒါန ၀ါသနာပါသလို အများသူငှာကိုလည်း မျှဝေခံစားရခြင်း၏ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ် ပီတိ တို့ကို စံစားစေချင်သလို အကျိုးလည်းရစေလိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် အခက်အခဲ ဒုက္ခမုန်တိုင်းထဲ ရောက်နေကြသော လူအများကို အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စေလိုသော ဆန္ဒကိုလည်း အကောင်အထည် ဖေါ်လို၍ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော် မိုးယံသည် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသလို ယခု အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သော (သို့) လိုက်လျောသော လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိသလို (အလူအများခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော နိုင်ငံရေးမျိုး) ထို့အပြင် ဤ စကားအတွက် လည်း မည်သူနှင့်မျှ ငြင်းခုန်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေး စစ်ရေး ဒီမိုကရေစီ ဘာဆို ဘာမျှ မသိသော အန္ဓတစ်ကောင် အတွက် လူကြီးမင်း၏ အချိန်ကို လေးစားတန်ဖိုး ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် ၀န်ခံစကားဆိုထားသည် ရှိပါ၏။ ကျွန်တော်သည် သိသမျှ အနည်းငယ် လောက်ထဲမှ အချို့သော အကြောင်းအရာများ ကို အများသူငါ အားပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။ ပျော်ရွှင်စေချင်၍ ဖြစ်သလို ကြည်နူးစေချင်၍လည်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အသိဥာဏ်တိုးစေသည်။ စာနာဂရုဏာ ထားတတ်စေခြင်သည်။ အထူးအဆန်းပြောင်းလဲနေမှုများ သိစေချင်ပါသည်။ ချင်ပါသည်. .. ချင်ပါသည်...ခြင်ပါသည်...ခြင်ပါသည်..။
Posted by မိုးယံ at 1:46 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
နောက်တော့ သူအဖွဲ့ အစည်းတွေက ကူညီသွားမှာပါ... လောလောဆယ်လိုအပ်နေချိန်ပေါ့.....
ကျနော်တတ်စွမ်းသလောက် ကလဲ ဒါပါပဲလေ.... ):
Blogger အင်္ဂါဟူး said...
အစ်မတစ်ယောက်က အ၀တ်အစားအသုံးအဆောင် တွေကို လှူချင်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ လို့ စီဘောက်စ်မှာ မေးမြန်းထားပါသည်။ ကျွန်တော်လဲ Anonymous ကိုဖြေထားသလို ပြန်ဖြေထားပါတယ်။ ဘယ်လိုဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေမလဲ ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။
9 November 2010 06:56
Blogger JUSTICE999BURMA said...
ကျနော် ပိုစ့်အသစ်တွေ တင်နေလို့အဟောင်းတွေကို ပြန်မကြည့်လိုက်မိဘူးဗျာ... Sorry
လှူချင်တဲ့ အမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေဗျာ.. ခက်တာက ကျနော်ကလဲ တဆင့်လူဖြစ်နေလို့ကိုမိုးယံပြောသလိုပဲ...... မလဲ့လဲ့နွယ်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လို့ ဗျာ...
9 November 2010 07:24
ဆေးဝါး အသုံးပြု၍လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် လုယက်မှု
အိန္ဒိယတွင် မွမ်ဘိုင်းအကြမ်းဖက်မှု နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်...
မြောက်က ဆော်တော့ တောင်က မြောက်ကို သတိပေး
King cobra (သို့) ငန်းမြွေကြီးများ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်း ဘယ်ခေါင်းလောင်းလဲ ....
မြန်မာမှ သြစတြေးလျသို့ အလုပ်ဗီဇာဖြင့် သွားမည့်သူမျ...
မွေးနေ့ မဟုတ်သော မွေးနေ့
တလွဲဆံပင်ကောင်းကြသော ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များ
ကျွန်တော့် ရဲ့ရင်သွေး ရတနာလေးတွေ